Prof. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa Eebbifame
Date: May 10, 2015Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 10 Caamsaa 2015) Prof. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa barumsa isaa xumuratee eebbifame.
Dhaloonnisaa Maccaa Lixaa, Oromiyaa kan taé Prof. Asafaa Tafarraa Dibaabaa, barreessa kitaabota hedduu taúun isaa beekamaa dha.
Guyyaa kaleessaa yunivarsiitii Amarikaa keessa jirtu kan Biluumgiton’ jedhamtu keessatti dooktorummaasaa qabxii adda ta’e galmeessisuun eebbifameera. Qabxii hunda dursu galmeessisuusaatiinis waraqaa ragaa addaa dhang’iameera.
Prof. Asaffaan hayyoota Oromoo addunyaa kanarratti sammuu guddaa qaban keessatti ramadama. Oromoof qabeenyaa guddaadha. Seenaa Prof. Asaffaafi hayyoota keenya akka addunyaatti waan baay’eetiin adda ta’an bifa kitaabaatiin yeroo dhiyootti kan qopheessinee dhalootaaf raabsinu yoo ta’u, ammaaf jireenya Asafaarraa dhaloonni maal barata kan jedhuunan goolaba.
Maatii qotee bulaa keessatti dhalatee kan guddatee Prof. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa, hayyuu dhaloota hedduu humneessee fi qare ta’uun beekamaadha.
Qabsoo barataan Oromoo kamuu dabarsu keessa nama dabarsedha. Gaaffii eenyummaa hedduu gaafataa nama tureefi sababa kanaafis yeroo gargaaraatti nama mana hidhaatti darbatamaa turedha. Kolleejjii Jimmaas barsiisaa ture. Booda kana yeroo Amarikaa deemuuf ka’etti ammoo Yunivarsiitii Finfinneettis barsiisaa ture.
Barattoota digirii jalqabaafi digirii lammataa ta’an haala gaariin nama barsiisaa tureefi falaasama Oromoon qabdu mara qotee baasuun hojjetee nama hojjechiisaa turedha.
Previous Previous post: Oromonni Melbourne waggaa 1ffaa OMN Kabajan
Next Next post: Boordiin Filannoo Itti Baha Filannoo Kan duraa Ibse